फोर्डले ईमोजी तान्छ हामीलाई विज्ञापन नगरी विज्ञापन सुरू गर्न | क्रिएटिव अनलाइन
नयाँ विज्ञापन च्यानलको रूपमा इमोजिस?
फोर्डले पिकअपको लागि गोप्य रूपमा नयाँ इमोजी डिजाइन गरेको छ जसरी ऊ कुरा चाहँदैन, र हामीलाई नजोगी प्रचार प्रसार गर्छ। यस्तो देखिन्छ कि आज हामी यो कुरा जान्दछौं जुन हामी अहिले जान्दछौं र हामी छक्क पारेको कारणले, किन कसैले यस्तो सोचेको होला जुन इमोजिस विज्ञापन हुन सक्छ?
बाट तपाईंको ट्विटर खाता उनीहरूले पा wheel्ग्रा लिएका छन् र शृ driven्खलाका शृ .्खलाहरू चालित छन् जुन घोषण गर्नका लागि उनीहरूले पिकअपको नयाँ इमोजी सिर्जना गरेका छन्। बहाना फोर्ड सवारीका 100 दिन र विश्व ईमोजी दिन भएको छ।
यो हिजो जुलाई 17 थियो जब थियो फोर्डले आफ्नो पिकअप इमोजीको घोषणा गर्‍यो केमा अब इमोजीको दिन भनेर चिनिन्छ (हामी थोरै पागल छौं, हैन?)। प्रश्नमा ईमोजी तार्किक रूपमा निलो र color प्रयोग गर्दछ जसले ब्रान्डलाई पहिचान गर्छ र तिनीहरू ब्राण्डमा लिंक भएको हेडलाइटहरू प्रस्तुत गर्दा तिनीहरू धेरै लुकाउँदैनन्।
त्यसो भए कती समय लाग्छ रातो सफ्ट पेय ब्रान्ड ईमोजी हेर्नुहोस्? ह्यामबर्गर जुन बर्गर किंग वा म्याकडोनाल्डबाट हो? यस्तो देखिन्छ कि ईमोजीको लागि यति सानो स्थानमा फरक छुट्याउन गाह्रो हुनेछ, तर यदि हामीले तिनीहरूलाई देख्न थाल्यौं भने हामी छक्क पर्दैनौं। यहाँ एक विचारको साथ आउँछ, र सयौं पछाडि ...
मनाउने #विश्व इमोजी दिवस र अधिक? फोर्ड सवारीका वर्षहरु, हामीले केहि नयाँ बनायौं ... ट्रक इमोजी आउँदैछ? pic.twitter.com/jXPDlvmauy
- फोर्ड यूके (@ फोर्डुक) जुलाई 17, 2019
सबै भन्दा खराब त्यो हो ती जसले यूनिकोडको ख्याल राख्छन्जुन इमोजीको मानक जस्तै हो, तिनीहरूले यसलाई स्पष्ट पार्दछ कि फोर्डको प्रायोजन प्रकाशमा ल्याउनुपर्दछ कि जसले गर्दा त्यो पिकअपमा धेरै पैसा छ भनेर सबैलाई थाहा हुन्छ।
जे भए पनि हामी हेर्नेछौं कि यदि आखिरमा ती अपरेटिंग प्रणालीहरूमा पुग्छ भने र प्रत्येकले स्पष्ट रूपमा विज्ञापन गरिएको ईमोजी समावेश नगर्ने निर्णय गर्दछ। यो हामीसँग भिटो गर्न र यो कारलाई प्रयोग गर्न पनि छ जुन साटो कुरूप हो तर त्यसले मोटर वाहन उद्योग, ड्राइभि and र गतिलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » नयाँ विज्ञापन च्यानलको रूपमा इमोजिस?
Mannequins मा प्रिन्ट घुसाउने कसरी